Manome voninahitra an'i Dr. Jane Goodall i Sierra Leone, eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany voalohany
Home » Toerana fitsangatsanganana » Manome voninahitra an'i Dr. Jane Goodall i Sierra Leone, eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany voalohany
Sierra Leone dia handray an'i Dr. Jane Goodall (DBE, anthropologist ary UN Messenger of Peace), manam-pahaizana indrindra momba ny chimpanzees mandritra ny telo andro, nandritra ny telo andro nitsidihany ny firenena, ny 27 febroary hatramin'ny 1 martsa lasa teo, 27 taona lasa izay. tamin'ny fananganana ny Tacugama Chimpanzee Sanctuary. Ny fitsidihana mandritra ny telo andro dia manasongadina ny hetsika fiarovana ny tontolo iainana ao Sierra Leone ary koa ny fisandratan'ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho toerana fizahan-tany maharitra.
Tacugama, toerana voalohany sy tokana misy an'i Sierra Leone, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny harena voajanahary ao amin'ny firenena, ny roa amin'ireo velaran-drano lehibe ao Freetown ary ireo chimpanzees tandindomin-doza. Hatramin'ny nananganana azy dia nanjary eken'ny sehatra iraisam-pirenena ny fitoerana masina, ka nahazo tombony tamin'ny olon'ny Sierra Leone tamin'ny alàlan'ny asa, fiarovana ny bibidia, fanabeazana momba ny tontolo iainana, fizahantany, fikarohana ary fikarohana ara-pahasalamana. Dr Goodall dia manohy manome aingam-panahy ho an'i Tacugama amin'ny alàlan'ny fitarihana sy fanentanana ny ho avin'ny Toerana Masina.
"Manantena ny handray an-tanana ny Dr. Jane Goodall izahay," hoy ny Excellency Fatima Bio, Ramatoa Voalohany any Sierra Leone. “Ny fitsidihany dia mamela anay hizara ny tantaran'i Sierra Leone amin'izao tontolo izao ary hamelombelona ny endrika iraisam-pirenena an'ny firenentsika, izay manandanja indrindra amin'ny fampandrosoana ny fizahantany maharitra, fiarovana, ary fampandrosoana ara-toekarena. Ny hatsaran'ny fahasamihafantsika voajanahary, ny bibidia ary ny kolontsaintsika dia tantara iray tianay hizarana ihany koa. ”
Ny fitsidihan'i Dr. Goodall dia tonga tamin'ny fotoana nandraisan'ny fizahan-tany ny fizahan-tany, ny fiarovana, ary ny faharetana ny faktiora farany eo amin'ny sehatra fizahan-tany manerantany. Ny halehibeny amin'ny maha-mpiaro tontolo iainana manerantany azy dia manome sehatra manerantany manan-danja amin'ny fitomboan'i Sierra Leone amin'ny maha toerana fizahan-tany vaovao azy. Ny fitsidihana dia hanehoana ny fanomezana fizahan-tany maharitra eto amin'ny firenena ary hampitombo ny fahafantarana ny filàna fiarovana ireo karazana tandindomin-doza ireo. Hanasongadina ihany koa ny fifandraisana mazava eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fizahantany maharitra.
Dr. Jane Goodall, mpanorina ny Jane Goodall Institute, dia naneho hevitra momba ny fitsidihany izay ho avy, “Manantena ny fitsidihako any Sierra Leone aho ary mirehareha amin'ny fiantraikan'ny Toeram-piarovana Tacugama Chimpanzee amin'ny famonjana ireo chimpanzees sisa tavela ao amin'ny firenena rehefa manome izay ilaina asa ho an'ny olona eo an-toerana. Faly manokana aho fa hihaona amin'ireo zanak'i Sierra Leone ary hizara amin'izy ireo ny programa Roots and Shoots. Izy ireo no fanantenantsika amin'ny ho avy. ”
Fametrahana sehatra ho an'ny fizahantany
Ny fitsidihan'i Jane an'i Sierra Leone (firenena fantatry ny Creole amin'ny anarana hoe Salone) dia tonga amin'ny fotoana mety indrindra rehefa miomana ny hamerina ny tenany eo amin'ny sehatry ny fizahantany manerantany ny toerana. Ny ankamaroan'ny olona dia manohy mampifandray an'i Sierra Leone amin'ny lasa sahirana, ka ny tanjona ankehitriny dia ny hampisondrotra ny toerana ho any amin'ny ho avy, mampiseho ny vokatry ny fanovana azy ho toerana manaraka "tsy maintsy tsidihina" ho an'ireo mpandeha fialamboly na mpandraharaha.
"Faly izahay mampiseho ny tolotra" tokana-any-Sierra Leone ", izay maro no hahagaga ny mpandeha an-tany," hoy Ramatoa Memunatu Pratt, Minisitry ny fizahantany, Sierra Leone. “Manolotra morontsiraka kilasy eran-tany i Sierra Leone, bibidia endemika mahavariana, kolontsaina manankarena sy toerana manan-tantara, fitsangatsanganana an-tsehatra, nahandro mahafinaritra any an-toerana, ary olona tia mandray olona tsara, izay mahatonga ny firenentsika ho iray amin'ireo toerana fizahan-tany vaovao mahaliana indrindra an'i Afrika.
Sierra Leone dia manana ny chimpanzees avo indrindra any an-ala, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ireo mpitsangatsangana dia afaka mahita fiainana dia ihany koa toa ny gidro Diana tandindonin-doza any amin'ny ala ao amin'ny Nosy Tiwai amoron'ny renirano Moa, karazana gidro colobus telo, vorona tsy fahita firy ary hipopotama pygmy.
Vao nanokatra birao vaovao momba ny fizahantany any an-drenivohitr'i Freetown i Sierra Leone, akaikin'ny Cotton Tree manan-tantara, ilay hazo landihazo tranainy indrindra any Freetown na mety eto an-tany ary mitovy dika amin'ny fahalalahan'ny mponina teo aloha. Io sy ny fanombohana ny magazina fizahan-tany fizahan-tany momba ny fizahan-tany vaovao sy ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa dia hita fa dingana lehibe ho an'ny sehatra.
Mizara fananana fizahan-tany
Mba hanombohana ny fampisehoana an'ity firenena mampino ity dia natolotray an'izao tontolo izao, Michaela Guzy, mpanatontosa mpanatanteraka, talen'ny, mpanoratra, Influencer ary Talenta an-habakabaka ho an'ny OTPYM (Oh The People You Meet), ary David DiGregorio, mpanorina ny CornerSun Destination Marketing , ho any Sierra Leone hanatontosa ireo andiana hetsika Jane Goodall. Hisambotra amin'ny sarimihetsika, ny fiainana dia, morontsiraka, olona ary fanomezana voajanahary amin'ity firenena somary tsy hita ity i Michaela. Ity horonantsary ity dia haseho amin'ny seho manokana any New York City amin'ny fiandohan'ny lohataona, hananganana ny dingana ho an'ny fanavaozana ny fizahan-tany any Sierra Leone amin'ny taona 2020.
"Ny fitsidihana an'i Jane Goodall, ary ny fanambaràna dia manome antsika fotoana mahasoa voalohany hanehoana ny fitambaran'ny tantaram-pitehirizana tantara manan-karena sy ireo traikefa nahafantarana olona tsy fantatra tsy fantatry ny mpitsidika," hoy i Guzy. “Faly be izahay fa hizara ny tsiambaratelon'i Sierra Leone amin'izao tontolo izao, ary iza no tsara kokoa hampiditra an'i Sierra Leone ho toeran-tany fizahan-tany maharitra noho i Jane Goodall?”
Ny MGM Resorts International dia nanambara ny fanovana ny mpitarika
Ny fandaniana nataon'i Hong Kong dia nitombo 5.8% ary tsy nitsaha-nitombo